रंग: RGB बनाम हेक्स बनाम CMYK बनाम PMS (Pantone) - के फरक छ? भिडियो - Print Peppermint
नोभेम्बर 21, 2019 | रंग, ग्राफिक डिजाइन, Pantone, प्रिन्टिंग बेसिक्स
(आईएमजी एसआरसी: https://rcpmarketing.com/color-matching-system-pms-cmyk-rgb-hex /)
रंगलाई सटीक र अनुरूप डिजाइनमा राख्नु सजिलो छैन। विश्वव्यापी रूपमा लाखौं डिजाइनरहरू सामग्री निर्माण र प्रिन्टि onमा काम गरिरहेका छन्।
यसको शीर्षमा, त्यहाँ अनन्त किसिमका ब्राउजरहरू, मोबाइल उपकरणहरू, टिभीहरू, र प्रिन्टिंग विधिहरू छन् जुन विभिन्न डिजाइनहरू जीवनमा आउँदछ।
कोहीले पनि अरबौं मोबाइल उपकरणहरू र व्यक्तिगत कम्प्युटरहरूमा अन्तर्निहित भिन्नताहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर त्यहाँ केहि र systems प्रणालीहरू छन् जुन विश्वव्यापी छन्।
यी, जब प्रभावी ढंगले प्रयोग, रंग र स्थिरता लामो पक्का छ कि सुनिश्चित गर्दछ। आज हामी बिभिन्न रंग प्रणालीहरू र ती दुई बीचको भिन्नता के विषयमा छलफल गर्नेछौं।
यो डिजिटल संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने रंग प्रणाली हो। आरजीबी रातो, हरियो र नीलो संयोजनको प्रयोग गरेर स्क्रिन र colors्ग रेन्डरिंगसँग सम्बन्धित छ।
RGB एक योजक प्रक्रिया CYMK को पूर्ण विपरीत हो। जब हामी तिनै र colorsहरू मिक्स गर्दछौं, हामी शुद्ध सेतो र शुद्ध कालो पाउँछौं जब हामी सबै तीन र removeहरू हटाउँछौं।
आरजीबी रंगहरू डिजिटल अनुप्रयोगहरूमा मात्र उपयुक्त छन् - उदाहरण को लागी, खेल, चलचित्र स्क्रीन, र प्रकाशित संकेतहरू।
यद्यपि RGB र colorsहरू स्क्रीनमा जीवन्त छन्, तिनीहरू दिनुहुन्छ निराशाजनक परिणामहरू जब मुद्रण को लागी प्रयोग गरीन्छ।
हेक्स (हेक्साडेसिमल रंग)
विकासकर्ताहरू र डिजाइनरहरूले स्क्रिन उद्देश्यहरूका लागि वेब डिजाइनमा मुख्य रूपमा हेक्स रंगहरू प्रयोग गर्छन्। एक हेक्स र color अक्षर र संख्याको छ-अ digit्कको संयोजनको रूपमा प्रतिनिधित्व हुन्छ जुन प्राथमिक र colorsहरूको मिक्सको साथ परिभाषित हुन्छ।
एक हेक्स र bas कोड मूलतः यसको आरजीबी मानको लागि केहि बीचमा केही रूपान्तरण कार्यप्रवाहको साथ एक शर्टहेन्ड हो।
रूपान्तरणको बारेमा तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि सबै भन्दा ग्राफिक डिजाईन सफ्टवेयर निर्मित रूपान्तरण उपकरणहरूले सुसज्जित हुन्छन्।
यस र system्ग प्रणालीलाई चार-रंग प्रक्रिया पनि भनिन्छ। यो एक त्यस्तो विधि हो जसको माध्यमबाट चार-मसी (स्यान, म्याजेन्टा, पहेंलो र कालो) को सानो पारदर्शी थोप्लाहरूको संयोजन मुद्रित हुन्छ।
साना र ठूला CYMK पारदर्शी डट्सहरूको विभिन्न संयोजनहरूले रंगहरूको फराकिलो स्पेक्ट्रम सिर्जना गर्न एक अर्कालाई ओभरल्याप गर्दछ। CYMK मुख्य रूपमा अनुप्रयोगहरू प्रिन्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, र यो एक ठोस र not् हुँदैन।
एक CYMK छापिएको टुक्रालाई म्याग्निफाइ glass गिलासको माध्यमबाट हेर्दै, तपाईं CYMK डट्सको ढाँचा र अन्तिम र make बनाउनको लागि उनीहरूको ओभरल्यापि see देख्न सक्नुहुनेछ।
CYMK र colorsहरू रंगीन प्रकाश अवशोषित गर्दछ, त्यसैले CYMK लाई "subtractive" रंग मोडेलको रूपमा चिनिन्छ।
PMS प्रणाली मुख्य रूपमा अफसेट प्रिन्टि forको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ र स्थिरको लागि आदर्श हो। PMS एक वा दुई रंग कार्यहरूमा प्रयोग हुन्छ।
चार र color्ग प्रक्रियाको साथसाथै, PMS र colorsहरू पनि प्रीमियम ब्रोशरमा स्पट कलरको रूपमा प्रयोग हुन्छन्।
PMS रंगहरू प्याटेन्टेड र मानकीकृत रized्ग मसीहरू जुन द्वारा बनाइएको हो Pantone कम्पनी. Pantone पहिलो कम्पनी हो जसले डिजाइन समुदायमा मेल खाने र र colorsहरू सिर्जना गर्ने पहिलो व्यापक मानक प्रणाली बनायो।
यस मानकीकरणले अधिकांश संगठनहरू र व्यवसायहरूलाई उनीहरूको ब्रान्डि,, विशेष गरी लोगोको लागि PMS रंग प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
यस तरीकाले, तिनीहरूले निश्चित गर्न सक्दछन् कि विश्वभरि उनीहरूको प्रिन्ट उत्पादहरूमा कडा रंग र स्थिरता पछ्याइएको छ।
हालको वर्षहरूमा, Pantone PMS लाई प्लास्टिक, जीवनशैली, फेसन र घरेलु उत्पादनहरूमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
Third तेस्रोको नियम के हो, र तपाइँ यसलाई तपाइँको ग्राफिक डिजाइनहरूमा कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
सेरिफ vs. सेन्स-सेरिफ फन्टहरू, के भिन्नता छ र मैले किन ख्याल राख्नु पर्छ? →